Howlgallo amni xaqiijin ah oo ka socota Buulo burte iyo Jalalaqsi – Radio Muqdisho
Ciidamada dowladda Fedaraalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa saaka howlgallo amniga lagu xaqiijinayo kawada inta u dhaxeysa degamada Buulo-burte iyo deegaanka Fiidow oo ee gobalka Hiiraan.
Howlgalkaan ayaa ujeedkiisuyahay sidii maleeshiyaadka looga sifeeyn lahaa inta u dhexeyso Buulo-burte iyo Jalalaqsi, sidoo kale Buulo-burte iyo deegaanka Fiidow, halkaasi oo ka mid ah goobaha ay sida dhuumaaleysiga ah ku soo galaan jidka oo ay dhibaatooyin u geystaan shacabka iyo gaadiidka.
Mas’uuliyiinta Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa howlgallada ku sifeeyay inay tahay mid lagu xaqiijinayo amniga deegaannada gobolka, isla markaana looga hortagayo in maleeshiyaadka Ururka Gumaadka Ummadda Soomaaliyeed ee UGUS ay jidka u galaan gawaarida sahayda u sidda bulshada ku nool Buulo-burte iyo Jalalaqsi.
Ciidamada isku dhafka ah ayaa waxa ay fariisimo ka sameysanayaan inta u dhexeyso Buulo-burte iyo Jalalaqsi, sidoo kale Buulo-burte iyo Deegaanka Fiidow, si dib deegaannadaasi loogu soo celiyo adeegyada guud ee bulshada.
Bandhig Hidaha iyo Dhaqanka ah oo lagu soo afjarayey rabshado ka dhacay Soweto oo lagu qabtay Koonfur Afrika